/ Ndeapi maonero ekutengesa musika wemuchina? -Industry nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Ndeupi maonero Vending muchina musika?
Views:8 Author: Shambadzira Nguva: 8 Origin:
2020 vending muchina indasitiri kusimudzira chinzvimbo uye maitiro ongororo.
Neenderere mberi kufambira mberi kwevending muchina mamodheru, iyo range kana zvigadzirwa zvinogona kutengeswa zvakawedzerwa zvakanyanya. Iyo earlier michina yekutengesa mu China chete akashanda na mari kana diki mari uye zvigadzirwa zvakatengeswa zvaingoitirwa zvinwiwa zvebhodhoro kana zvemumagaba. Mazuva ano akangwara vending machines inowirirana neinternet kubatana uye nharembozha uye zvigadzirwa zvinotengeswa hazvichingobvumidzwa kuve zvinwiwa, zvidyiwa, chikafu uye zvinodikanwa zvezuva nezuva.
Vending michina zvakajairika michina of kushandisa michina, vanoshanda vasina ganhuriro kubva nguva nenzvimbo, ponesa manpower uye gonesa zviitiko. Vari inozivikanwawo se24-awa mini-marts. Vending muchina indasitiri iri kuenda kune ruzivo rwetekinoroji uye nekuwedzera kufunga.
2020 Vending muchina indasitiri maitiro ongororo
Semutakuri akakosha pane nyowani yekutengesa, michina yekutengesa yakaumbana, inochinjika uye ine zviitiko zvakakura zvekushandisa zvinosanganisira zvivakwa zvehofisi, nzvimbo dzekufambisa, zvikoro, zvitoro, mafekitori zvichingodaro kupa sevhisi iri nyore kune vatengi ikoko. Musika wemuchina wekutengesa ucharamba uchikura uchiperekedzwa nekufumiswa kweiyi indasitiri uye kusimudzira kwekubhadhara nhare uye kwenguva ya2019-2025 mwero wekuwedzera wegore unotarisirwa kuve 30% nerutsigiro kubva kumatongerwo enyika nemirau yeindasitiri.
Prev: Iyo indasitiri yemuchina yekutengesa iri kupinda munguva yemurume.
Zvadaro: Vending muchina inova tarisiro yebudiriro mumusika wakangwara wekutengesa nemhando dzakasiyana dzebhizinesi.